တရုတ် အစိုးရ က စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမည့် သတင်းမှာ ကောလဟာလ ဟု ဆို | Freedom News Group
တရုတ် အစိုးရ က စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမည့် သတင်းမှာ ကောလဟာလ ဟု ဆို
by FNG on April 13, 2012	တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီ နှစ်ခြမ်း ကွဲ နေ ပြီး ၊ တရုတ် နိုင်ငံ တွင်း စစ်အာဏာသိမ်း ဖွယ်ရှိသည် ဆို
သည့် သတင်းများ ကို တရုတ် အစိုးရ က ငြင်းဆို လိုက်သည်။ တရုတ် နိုင်ငံ ၏ အင်တာနက်ဘ
လောက် ၊ လူမှု ကွန်ယက် နှင့် ဖိုရမ်များ မှ တစ် ဆင့် စစ်အာဏာသိမ်းနိုင်သည် ဆိုသည့် သတင်း
နှင့် တရုတ် ကွန်မြူ နစ် ပါတီ နှစ်ခြမ်း ကွဲ နေပြီ ဆိုသည့် သတင်း သည် ကျယ်ကျယ် ပြန့် ပြန့် ပေါ်
ထွက် ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ် အစိုးရ ၏ အားနည်း အချို့ကို ထောက်ပြ မှု သတင်း အချက် အလက် များ နှင့် ကွန်မြူ
နစ် ပါတီ ပြိုကွဲ နေပြီ ဆိုသည့် သတင်း များ မှာ တရုတ် ကွန် မြူ နစ် ပါတီ ပေါ်လစ်ဗျုရို အဖွဲ့ ဝင်
နှင့် ဗဟိုကော်မတီ ၀င် ဘိုရှိလိုင်း ကို ထုတ်ပြစ် ပြီး ချိန် တွင် ထွက် ပေါ် လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘိုရှီလိုင်း ကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လက ချုံချင့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ရာထူး မှ ဖယ်ရှား ခဲ့သည်။
ချုံချင့် ပြည်နယ် တွင် ဆန္ဒပြ မှု များ ပေါ်ပေါက် နေ ရာ တရုတ် လက်နက် ကိုင်ရဲတပ် ဖွဲ့က အ
ကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမှု များ ပြု လုပ် ခဲ့ သည် ဟု India Times သတင်းစာ တွင် ရေးသား ထားသည်။
ဘိုရှီလိုင်း ၏ ဇနီး ဖြစ်သူ ဂူကိုင်လိုင်း သည် ဗြိတိသျှ စီးပွား ရေးလုပ် ငန်း ရှင် နီးလ် ဟေးဝဒ် သေ
ဆုံး မှု တွင် သံသယ ရှိသည် ဟု ဆိုကာ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ကာ ဖမ်းဆီး ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေး မှု များ
တရုတ် အစိုးရသည် အာဏာ သိမ်းမည် ဆိုသည့် သတင်း နှင့် တရုတ် ကွန်မြူ နစ် ပါတီ ပြိုကွဲ နေပြီ
ဆိုသည့် သတင်းများ ကို ငြင်းဆို ခဲ့ ပြီး ၀ဘ် ဆိုတ် ၂၄ ခုနှစ် စာ ပိုဒ် တင်ဆက်မှု နှစ်သိန်း ကျော်ကို
ဖျက်ပစ်ခဲ့ ပြီး ၊ အွန်လိုင်း တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူများ နှင့် ဘလောက်ဂါ များ ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
တရုတ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် အချို့က ဘိုရှီလိုင်း ကို ထောက်ခံမှု
ပေးသည် ဆိုသည့် သတင်းများ လည်း ပေါ် ထွက် ခဲ့သည်။
တရုတ် သမ္မတ ဟူကျင်တောင်မှာ ယခင် ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ကျန်ဇီ မင်း ကဲ့ သို့စစ်တပ် ကို
ထိမ်းထား နိုင်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံ ရေး တည်ငြိမ် အောင် မလုပ် နိုင်ဆိုသည့် ဝေဖန် သုံးသပ် ချက်များ
လည်း မတ်လ ကတည်း က ထွက် ပေါ်လာခဲ့သည်။
စစ်တပ် က အာဏာသိမ်း မည့် သတင်း ဖြန် ခဲ့သည် ဟု ယူဆသည့် လူတစ်ထောင် ကျော်ကို လည်း
ဘေဂျင်း ရဲ တပ် ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ အရေး ပါသည့် ရာထူးများ မှ ဖယ်ရှား လိုက်ခြင်း ကြောင့် ဘိုရှီ လိုင်း
သည် နိုဝင်ဘာလ တွင် ကျင်းပမည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပါတီ ကွန် ဂယက် သို့တက်ရောက်နိုင်
ခြင်း မရှိ တော့ ဟု သိရသည်။
ဘိုရှီလိုင်း နှင့် ဇနီး ဖြစ်သူ ဂူကိုင်လိုင်း တို့ နှစ်ဦးသည် ဘေဂျင်း တက္ကသိုလ် တွင် ၁၉၇၈ ခုနှစ် က
တွေ့ ဆုံခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်နှစ် အတန် အကြာ တွင် လက်ထပ် ခဲ့သည်။ တရုတ် ပြည်၏ ဂျက်
ကလင်း ကနေဒီဟု ဘိုရှီ လိုင်း ၏ ဇနီး ကို တင်စား ခေါ် ဝေါ်ကြသည်။
Bo Xilai, Neil Hayward, China, Politburo
The rise and fall of Bo Jilai and Gu Kailai (leaderswedeserve.wordpress.com)
China Attempts to Contain High-Level Political Scandal (1oneday.wordpress.com)
Bo Xilai Punishment Triggers Beijing Tsunami (alakhtal.wordpress.com)
Bo Xilai First to Fall Ahead of China’s 18th Annual Party Congress (reason.com)
Tags: Asia, Bo Xilai, Business and Economy, China, Communist Party of China, India, India Times, Politburo	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် စုနမိ အန္တရယ် သက်ရောက်မှု မရှိ ၊ ငလျှင် ငယ်များ ဆက်လက်လှုပ်နေဆဲ (Update)
သူရဲကောင်းဆိုတာ… အခန်း (၅) ၊ တတိယပိုင်း →
Tudor Rickards	#
Thank you for your informative news from China. I congratulate on your millions of ‘visits’ each year and will share them with my subscribers to Leaders we deserve.
April 13, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,547,243 hits
abcnews.go.com/Business/wireS… 15 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyICRC advising police in MyanmarMyanmar opens SEA Games with 'coming-out party for the country'myanmar-sea-games-reuters-101213.JPGMyanmar tightens regulations to ensure future investors able to develop DaweiMyanmar beat Timor Leste to record second straight winsea_games-myanmar-2013-logo.jpgMalaysian Athletes Get Serious For Glory In Myanmar SEA GamesWant Burma info in your inbox each morning?